Umaki: Tapjoy | Martech Zone
I-MOLOCO Cloud: Idatha-Eqhutshwa, Izixazululo Zesikhangiso Seselula se-AI-Powered zezinhlelo zokusebenza zeselula
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 30, i-2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 30, i-2021 Douglas Karr
I-MOLOCO Cloud iyipulatifomu yokuthenga ezenzakalelayo yokuqoqwa kwezikhangiso kuwo wonke ama-exchange program ahamba phambili emhlabeni kanye namanethiwekhi esikhangiso angaphakathi nohlelo. Manje isiyatholakala njengengxenyekazi esuselwa emafini yabo bonke abathengisi bohlelo lokusebenza, iMOLOCO Cloud inikwa amandla ubuchwepheshe bokufunda bemishini obunika amandla abathengisi beselula ukuthi basebenzise idatha yenkampani yokuqala namasinali wokuqukethwe avela kulo lonke uhlelo lwezemvelo ukuze basebenzise imikhankaso yezikhangiso ngokuzenzakalela amamethrikhi wokusebenza. Izici ze-MOLOCO Cloud Zihlanganisa Ukuhwebelana - finyelela kuselula
IJustControl.it: Yenza Ngokuzenzakalelayo Ukuqoqwa Kwedatha Kwiziteshi Ezizonke
NgoLwesithathu, Okthoba 7, 2020 NgoLwesithathu, Okthoba 7, 2020 URoman Sulla
Ukumaketha kwedijithali kuqhutshwa yisidingo sokwenza ngokwezifiso okukhulu: imithombo emisha yedatha, inhlanganisela entsha yobambiswano, amanani aguqukayo, izimo ze-UA eziyinkimbinkimbi, njll. Ngokuqondene nekusasa lomkhakha wethu, lithembisa ukuba yinselelo enkulu futhi ibe yimbudumbudu. Kungakho ochwepheshe abaphumelelayo nabafisayo badinga ukuzisebenzisela ukubhekana nezimo eziyinkimbinkimbi nezithombe eziyinkimbinkimbi. Kodwa-ke, amathuluzi amaningi akhona asanikeza indlela ephelelwe yisikhathi 'yobukhulu obufanele bonke'. Ngaphakathi kwalolu hlaka lokuqala, wonke amafayela we-
Uhlelo lokusebenza Annie: Imali engenayo yeselula, ukulanda, izilinganiso, izibuyekezo kanye namazinga
NgoLwesihlanu, ngoJuni 13, i-2014 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
I-App Annie's Advertising Analytics ihlanganisa imali kanye nezindleko zesikhangiso zohlelo lokusebenza lweselula kanye nezindleko eceleni kokulandwayo nemali engenayo. Lokhu kuzonikeza onjiniyela bezinhlelo zokusebenza ukuqonda ekusebenzeni kwezimakethe zezinhlelo zabo zokusebenza konke kusixhumi esibonakalayo esisodwa, esilula sokubika. Uhlelo lokusebenza u-Annie bese luvele ludumile kabanzi kuma-analytics wesitolo sohlelo lokusebenza nokuhlakanipha kwemakethe. Ngaphandle kwesango, izibalo zabo zezimali ezikhangiswayo zihlanganiswe neMobvista, nativeX, RevMob TapIt, Tapjoy, Taptica, AdColony, AdMob, Appia AppLift, AppLovin, Everyplay GameAds iAd Network, iAd